Aaladaha kale ee Android: Wararka, Faahfaahinta, Xanta iyo inbadan | Androidsis (Bogga 3)
Jiayu S4, terminal 4.7-inch 64-bit ah iyo USB Type-C
Dhowr sawir oo naqshadeynta dhismaha Jiayu S4 ee soo socda ayaa la dusiyay, sidoo kale qeexitaankiisa ayaa la dusiyay.
Olio waa khiyaano $ 600 smartwatch ah
Sannadka 2015 wuxuu noqonayaa sanadkii ay saacadaha smartwatches ka baxaan, waxaa horey u jiray shirkado badan oo daneynaya inay iyagu abuuraan, sida kan Olio, oo ah saacad isle'eg laakiin qaali ah.
Xiaomi wuxuu soo bandhigayaa nooc 40-inji ah oo ah Mi TV 2, TV-ga Android-ka ah ee 320 doollar
My TV 2 oo wata Android 4.4 KitKat, 40 inji iyo Sharp panel oo ah 320 doolar ayaa noqda wax soo saar laga fiirsado qiimaha lacagtiisa
5-ta qalab ee ugu fiican ee la bixiyo Maalinta Aabbaha
Wali ma oga waxa la siinayo Maalinta Aabbaha? Waxaan kuu keenaynaa 5-ta Aalado ee ugu wanaagsan ee la bixiyo maalintaan.
Micromax wuxuu ka bilaabay telefishanka Android TV 4K telefishanka gudaha Hindiya qiime ku dhow $ 640
Qiimaha ugu dhow ee $ 640 Micromax wuxuu soo bandhigayaa telefishanka 4K iyada oo leh TV-ga Android ee Hindiya. Sharad cusub oo la socota TV-ga Android kaas oo inbadan lagu dari doono
NVIDIA Shield ayaa timid, qunsulka Tegra X1 iyo Android TV 4K ee $ 199
NVIDIA Shield wuxuu la yimaadaa dhammaan kartida ay bixiso Tegra X1 chip iyo awoodaha badan ee leh TV-ga Android
LG G3 VR: LG galaas xaqiiqda dalwaddii dhabta ah ayaa laga heli doonaa bisha soo socota bilaash bilaash kuwa iibsada LG G3
Isla bishaan, LG-ga muraayadaha cusub ee dhabta ah ee muuqaalka ah ayaa la heli karaa, LG G3 VR, oo sidoo kale gebi ahaanba xor u ahaan lahaa iibsadayaasha LG G3.
Kiiska u rogaya mobiladaada Polaroid, Prynt, wuxuu yoolashiisa ku gaarayaa Kickstarter
Mid ka mid ah mashaariicda ugu xiisaha badan ee loogu talagalay kamaradaha Polaroid ee mobilka, Prynt, ayaa noqday mid dhab ah oo gaadhay maalgelinta shirkadda Kickstarter.
Samsung Gear VR hadda waxaa laga iibsan karaa Best Buy oo ah $ 199
Waxaan hadda ka iibsan karnaa Samsung Gear VR $ 199 iyada oo loo marayo bogga rasmiga ah ee Iibsiga Fiican.
Mi Box Mini, sharadka kale ee Xiaomi ee loogu talagalay waxyaabo badan oo warbaahin ah oo ku kacaya € 30
Mi Box Mini wuxuu la yimaadaa ujeedka ah inuu dhexgalo qolkaaga fadhiga si uu ugu xirmo shaashadda TV-ga iyada oo loo marayo HDMI
IPow 10000E ugu fudud 10.000 mAh Walio PowerBank suuqa
IPow 10000E oo ka socda Walio Electronics waa 10000 mAh Power Bank oo hubiya inaan ku soo oogi karno telefonkeena casriga ah ama kaniiniga meel kasta.
NES30, fog ee qalabkaaga Android ee isku dhafka nostalgia tayada iyo saxsanaanta
NES30 waa kontaroole kudayasho joornaalka caanka ah ee NES, Console-kii ugu horreeyay ee Nintendo, oo si fudud oo aan fiicnayn loo dhammeeyo iyo tayada.
Ha ku lumin wax Tile, aalad raadraac oo hadda diyaar u ah Android
Tile wuxuu si fudud ula qabsadaa boorsadaada ama furayaasha furaha si uusan u lumin marwalbana had iyo jeer ha ku yaalliin barnaamijka laftiisa.
Samsung Gear VR ayaa horeyba loogu iibiyay Mareykanka
Hawlwadeenka AT & T wuxuu dhigay muraayadaha Samsung Gear VR ee xaqiiqda dalwaddii lagu iibinayo qiimo dhan $ 199. Waxaa la filayaa in Spain ay dhowaan gaarto
Waxaan tijaabinay Walio IBTA 211, oo ku hadla af-Ingiriisiga xiisaha leh nooc kasta oo qalab ah
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dib-u-habeynta af-hayeenka Bluetooth ee xiisaha leh ee ka soo jeeda Walio, Walio IBTA 211 oo leh awood aad u fiican, tayada codka iyo madax-bannaanida oo ka yar 26 euro.
Jawbone wuxuu bilaabayaa Up Move, qiyaas shaqsi ahaaneed € 49,99 iyo 6 bilood oo batari ah
Jawbone Up Move waa tiro koob shakhsiyeed leh cabir yar, kufiican culeyska luminta iyo ilaalinta qaabka.
Jijito smart band Microsoft Band dhawaaqay
Microsoft waxay ku soo jiidanaysaa jihooyin cusub jijinkan casriga ah ee casriga ah ee loo yaqaan Microsoft Band
Amazon waxay soo bandhigaysaa Fire TV Stick, oo ah tartame Chromecast
Fire TV Stick waxaad ku shubi kartaa shaashadda shaashadda TV-ga adoo ku xiraya isku xirnaanta HDMI isla
HTC RE, kamaradda nooca "GO Pro" ee HTC u qaabeysan sida aaladda loo yaqaan 'periscope'
HTC RE waa aaladda kale ee shalay lagu soo bandhigay magaalada New York ee la socota HTC EYE
Waxaan horeyba uheysanay xalka dhibaatada iPhone 6 ee foorarsan, Uri Geller ayaa na siisa
Waxaan horeyba u helnay xalka dhibaatada iPhone 6 ee foorarsan, sharraxaadu waxay ka timid gacanta Uri Geller
Honda Connect: Nidaamka infotainment ee NVIDIA ee Honda Civic 2015
Honda Connect waa nidaamka infotainment ee NVIDIA Tegra chip ee baabuurta Honda ee soo socota 2015
Suuqa Oral-B waa cadayga ugu horeeya aduunka ee xariifka ah ee Spain
Oral-B ayaa mas'uul ka ah suuq geynta cadayga ugu horreeya ee casriga ah ee 'Bluetooth' ee Spain
Imtixaanka dulqaadka: taleefannada casriga ah ee Android iyo qalabka Apple
Halkan waxaan kaaga tagnay tijaabadan adkeysiga taas oo aan ku wajaheyno Android Smartphones iyo qalabka Apple
VR Quest, ciyaartii ugu horreysay ee Samsung Gear VR
Kooxda Oculus waxay xaqiijineysaa in godkeeda VR Quest uu yeelan doono nooc la jaan qaadi kara Samsung Gear VR
Lakento MVR, muraayadaha xaqiiqda dhabta ah ee 60 euro
Lakento waa shirkad Isbaanish ah oo diyaarinaysa muraayadaha xaqiiqda dhabta ah, Lakento MVR, qiimo aad u qurux badan
SanDisk Connect, noocyada cusub ee darawallada adag ee wireless-ka loogu talagalay taleefannada casriga ah
Waxaan u tagnay sanduuqa SanDisk si aan kuu tusno noocyadeeda cusub ee SanDisk Connect fiilooyinka adag ee wireless-ka ah
Logitech K480 waa kumbuyuutarka ugu horeeya ee kuu ogolaanaya inaad isku xirto ilaa 3 qalab isla waqtigaas
Logitech K480 waa kumbuyuutarkii ugu horreeyay ee isku mar ku xirma illaa 3 aalado isla mar ahaantaana ka kala duulaya aagagga kala duwan ee jira
Qalabka loogu talagalay taleefankaaga: Sony QX30 iyo lenses kaamerada QX1
Muraayadaha muraayadaha la qabsiga ee loo yaqaan 'Sony QX30 iyo QX1' waa qalabka ugu fiican ee casrigaaga.
Motorola Ka gudub saaxiibka mustaqbalka ee ku habboon android-kaaga
FCC waxay soo saartay qalab cusub oo Motorola ah, Motorola Skip, qalab cusub oo la cusbooneysiiyay kaasoo noo ogolaanaya inaan furno oo aan helno moobilkeena.
QBracelet: fikradda la gashado ee lacag-bixinta moobiilka
Haddii saacadaha casriga ahi ay ku jiraan moodel, soo-jeedinta QBracelet ma noqon mid aan laga warqabin. Wearable oo kaliya u adeegta inuu ku dalaco taleefanka, laakiin leh qaab badan.
Xiaomi Mi Band jijin caaqil ah ayaa la heli doonaa Ogosto 18
Xiaomi Mi Band waa jijin caqli badan oo ku timaada qiimo ka wanaagsan kan oo la heli doono afar maalmood oo keliya
Navdy HUD, oo ah tartameyaasha 'Auto Auto'
Toddobaadyo ka hor ayaa si rasmi ah loo shaaciyey Android Auto oo ay haddaba leedahay la tartame, Navdy HUD, kaas oo bixiya wax la mid ah laakiin leh qaab aad u mustaqbal leh
2 qaababka cajiibka ah ee Amazon FirePhone, Dynamic Persention iyo FireFly
Maanta waxaan rabnaa inaan ku tusno laba astaamood oo cusub oo loo yaqaan 'Amazon FirePhone', mid waa aragtida firfircoon iyo midka kale ee FireFly.
Maanta waxaan sii deyneynaa qeybtaan codsiyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay ChromeCast oo leh LocalCast, oo ah ciyaaryahanka ugu fiican ee qulqulka u leh ChromeCast
Jijin gacmeed smart ZTE's Grand Band wuxuu umuuqdaa wax badan sida Nike's FuelBand
Jijin xariif ah oo loo yaqaan 'ZTE's Grand Band' ayaa lagu shaaciyey inay la mid yihiin shirkadda Nike
Xiaomi waxay soo bandhigaysaa jijimadeeda 'Mi Band' oo ah smart 10 iyo 30 maalmood oo ismaamul ah
Mi Band waa jijin casri ah oo loogu talagalay jimicsiga jirka oo ay soo bandhigtay Xiaomi oo leh madaxbanaani 30 maalmood ah waxaana lagu qiimeeyaa € 10
#Chromecast: Sida loo muraaqeeyo kombiyuutarkaaga gaarka ah
Maanta waxaan rabaa inaan sharrax ka bixiyo sida loo muraayad-geliyo kombiyuutarkaaga shaqsiga ah iyada oo ay ugu wacan tahay Chromecast iyo fidinta bilaashka ah ee Chrome.
goTenna marka uusan jirin xiriir Wi-Fi ah ama shabakadaha mobilada
goTenna waa aalad ku habboon sahamiyayaasha iyo dadka sameeya cayaaraha khatarta sare leh, maadaama ay kuu oggolaaneyso inaad ku xirmaan halka uusan xiriir ka jirin
Sida loogu sahlo muraayadda Chromecast aaladaha aan la taageerin
Maanta waxaan ku tusinayaa khiyaano aad ku dhaqaajineyso muraayad ka sameynta Chromecast, xitaa boosteejooyinka loo arko inaysan ku habboonayn dalabka.
Vexia waxay soo bandhigeysaa Muuqaalka Sixirka: ku xir, ku xir oo la wadaag qaybtaada TV-gaaga
Magic Vision waa shey gebi ahaanba Isbaanish ah oo raacaya raadadkii uu ka tagay Chromecast
2 xulasho si aad ugu iibsato Chromecast dukaan jireed
Halkan waxaan kaaga tagayaa laba ikhtiyaar oo aad ku iibsan karto Chromecast dukaan jireed, waxaan noqon doonnaa ganacsi noloshiisa oo dhan leh kuwa kugu tiirsan iyo wax walba.
Waa waqtigii la iibsan lahaa Chromecast, hadda waxay u oggolaaneysaa mirroring!
Waa maxay waqtiga ay tahay in la iibsado Google's Chromecast? Sababtoo ah ikhtiyaarka muraayadda ama muraayadda muraayadaha horay ayaa loo shaqeeyay.
KiZON cusub oo laga soo qaadan karo LG si loo daryeelo carruurta loona ogaado waxa ay qabtaan
Jiziimadda casriga ah ee KiZON ayaa ah aaladda ugu habboon ee waalidku ugu baahan yahay inay ku hayaan daryeelka carruurtooda mar walba marka ay u wareejinayaan
Dhammaan barnaamijyada 'Android Wear' waxay horeyba u leeyihiin qayb u gaar ah oo ku taal Play Store
Dhamaan barnaamijyada 'Android Wear' hadda waxaa laga heli karaa qaybtooda gaarka ah ee Play Store
Jiilka cusub ee Oculus Rift DK2 wuxuu la yimid 1080p
Oculus Rift DK2 waxay gaareysaa isticmaaleyaasha ku iibsaday 10000 unug oo loo qeybinayo
Iibinta xargaha xargaha ayaa afar jeer ka sarreeya smartwatches
Iibinta xargaha curcurka smart waxay afar jeer ka badan yihiin kuwa smartwatches.
Iibsashada OnePlus One hadda waa suurtagal iyada oo aan lagu casuumin
Iibsashada OnePlus One casuumaad la'aan durba waa suurtagal, hoosta waxaan ku sharixi doonaa dhammaan faahfaahinta.
Samsung Galaxy S5 VS iPhone 5S, yaa ku guuleysan doona dagaalka?
Dagaal u dhexeeya Samsung Galaxy S5 VS iPhone 5S, yaa noqon doona guuleystaha? Fiidiyowga aan ku lifaaqnay waxaad ka arki kartaa naftaada.
Cukitalk, Qalab loogu talagalay taleefannada casriga ah ee awood u leh inuu turjumo waqtiga dhabta ah
Maanta waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo Qalabkan xiisaha leh ee loogu talagalay taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Cukitalk', oo awood u leh inuu ku turjunto waqtiga dhabta ah in ka badan 25 luqadood.
Swarovski oo loogu talagalay Samsung, Qeyb dhan oo wax soo saar ah oo loogu talagalay Samsung Galaxy S5 iyo Gear Fit
Laga bilaabo berrito waxaan awoodi doonnaa inaan ka helno dukaanka khadka tooska ah ee Samsung, badeecooyin cusub oo cusub oo ay Swarovski u sameysay Samsung,
Dimple.IO ama sida loogu daro badhano jireed cusub galkaaga Android
Dimple.IO wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto badhanno cusub jireed bartaada Android adoo adeegsanaya tikniyoolajiyadda NFC.
Dhammaan wixii ku saabsan Mashruuca Ara ee casriga casriga ah
Shalay waxaa dhacay shirkii Mashruuca Ara ee aaladaha casriga ah ee casriga ah kaasoo suurta galiyay in dad badani ay waxbadan ka ogaadaan soojeedintan xiisaha badan
Hadda waxaad ka iibsan kartaa Chromecast si rasmi ah Google Play Store
Haddii aad ka mid tahay isticmaaleyaasha doonaya inay iibsadaan Chromecast oo aadan si fiican u aqoon waxa loogu talagalay, halkan wax walba ayaan kuugu sheegi doonaa.
Chromecast hadda waxaa laga heli karaa Spain iyo 10 dal oo dheeri ah for 35
€ 35 waa qiimaha Chromecast ee Dukaanka Play-ka laga heli karo laga bilaabo maanta si loo iibsado.
Google Glass yaabka leh wuxuu muujinayaa isjiidka filimka kaliya adoo fiirinaya boodhadh
Fiidiyowga soo socda waxaan ku arki karnaa mid ka mid ah shaqooyinka cusub ee muraayadda Google Glass, muraayadaha Google ee la kordhiyay.
Wac qalab cajiib ah oo kuu oggolaanaya inaad xakameyso qalab kasta oo caqli badan
Giraantu waa aalad aan caadi ahayn oo loogu talagalay Android iyo macruufka oo noo oggolaanaya tikniyoolajiyad tilmaam si aan ugu dhaqaaqno ku dhowaad tallaabo kasta.
Nooca ugu dambeeya ee Chromecast SDK ayaa hadda la heli karaa
Markaan horeyba u helnay nooca ugu dambeeya ee Chromecast SDK, waxaan bilaabi doonnaa inaan aragno codsiyo badan oo ku saabsan dongle Google oo ku yaal Play Store.
Soodeji Telegram-ka Windows, Linux iyo MAC
Halkan waxaad ku leedahay dhammaan xiriiriyeyaasha tooska ah ee loogu soo dejiyo Telegram dhammaan mobilada iyo desktop OS, oo ay ku jiraan kordhinta Google Chrome.
Android iyo xayawaankaaga xayawaankaaga ah: Fooridu waa «wearable» oo diiwaangelisa waxqabadka eygaaga
Fooridu waxay raacaysaa isla jidkii loo yaqaan 'FitBark' iyadoo la siinayo qalab lagula socdo dhaqdhaqaaqa eeygaaga iyadoo la adeegsanayo taleefankaaga casriga ah.
Telegram sidoo kale waxaa laga heli karaa kombiyuutarkaaga shaqsiga ah
Halkan waxaad ku haysataa hal sabab oo kale oo aad ugu aaddo arjiga muujinta xilligan, taasna waa in Telegram lagu heli karo nooca desktop-ka.
FitBark waa qalab loo xirto Android eeyaha
FitBark waxaa maal galiyay shirkada Kickstarter waxaana usbuucii la soo dhaafay lagu soo bandhigay xarunta CES ee magaalada Las Vegas.
Qalabka Cajiibka ah ee loogu talagalay Android, Maanta SwachtMate Cube
SwachtMate Cube waa Qalabka xiisaha leh ee loogu talagalay Android iyo iOS kaas oo noo ogolaanaya inaan qabanno oo kaydinno midab kasta oo dusha sare ah.
Bulsho ahaan, marka xilligan iyo xilligu bilaabmayo ay is barbar socdaan
Cusub oo ka socda Polaroid waa Socialmatic, oo lagu soo bandhigay CES 2014.
Nabu, Razer smartband
Razer, oo ah shirkadda caanka ah ee kumbuyuutarka iyo shirkadaha durugsan, ayaa ku dhawaaqeysa Razer Nabu, oo ah smartband-keeda.
CES 2014: Hisense X1, Rafaa gacmahaaga ku jira
Hisense X1 waa terminal aan doonayay inaan ku magacaabo magac ahaan kala saarida Phonstruo madaama uusan aheyn Smartphone, Phablet, ama Tablet
Polaroid Socialmatic waa kaamiro Android ah oo isla markiiba sawiraya sawirada
Nostalgic, Polaroid Socialmatic waxay noqon doontaa xulasho weyn oo lagu soo daabici karo sawirka lagu qaaday kamaraddan Android isla markiiba.
Telefoonada casriga ah ee kale ee Android: THL W8S
THL W8S waxay na siineysaa dhamaan astaamaha kaladuwanaanta ugu sareysa Android qiimo aan la diidi karin.
Qalabka Cajiibka ah ee Android: Udgoon, ogeysiisyo caraf ah
Scentee waa mid ka mid ah aaladaha cajiibka ah ee loogu talagalay Android kaas oo noo ogolaanaya inaan ku helno ogeysiisyada udgoon ee bartayada 'Android' ama 'iOS'.
Telefoonada casriga ah ee kale ee Android: Guophone I9500L
Maanta qeybta kale ee casriga ah ee casriga ah waxaan ku soo bandhigeynaa Guophone I9500L, Mid kale oo ka mid ah Samsung Galaxy S4 qiimo aad u wanaagsan.
Taleefannada casriga ah ee kale ee Android: Maanta THL W8
Maanta qeybta kale ee casriga casriga ah ee 'Android Smartphones' iyo qiime wanaagsan waxaan ku soo bandhigeynaa THL W8.
Samsung Galaxy Note 3, dhibaatooyinka badhanka guriga
Kaliya laba toddobaad ka dib markii adduunka oo dhan loo qaybiyey, dhibaatooyin ayaa durba laga soo sheegayaa badhanka guriga ee Samsung Galaxy Note 3.
Sony waxay soo saareysaa laba ciyaaryahan oo Walkman ah oo ku saleysan Android
Laba Ciyaartoy oo cusub oo ku saleysan Android Walkman ayaa sii daayay Sony kuwaas oo ku dhufan doona suuqa Japan Oktoobar 19.
Jolla Telefoon leh Sailfish OS 399 Euros, waanu walannay !!
Astaamaha farsamada iyo qiimaha taleefanka casriga ah ee Jolla oo si fiican loogu yaqaan Jolla Phone oo leh Stailfish OS.
Sony waxay rajeyneysaa Bravia Smart Stick, "Dongle" oo leh TV-ga Google
Sony waxay rajeyneysaa imaatinka Bravia Smart Stick Dongle, kaas oo cusbooneysiin doona TV-yadaada Sony si aad ugu daawato Google TV iyaga.
Sony ayaa soo bandhigtay muraayadaha indhaha ee loo yaqaan 'QX10 iyo QX100 lenses' shalay
IOS iyo Android labaduba waxay awoodi doonaan inay isticmaalaan lenses-ka Sony ee QX10 iyo QX100, iyagoo u rogaya taleefannada casriga ah muraayadaha indhaha ee dhijitaalka ah si ay sawirro waaweyn uga qaadaan.
Batariyada la qaadan karo ee Sony ee aaladaha lagu dalaco
Sony waxay soo bandhigtay baytariyaal la qaadi karo si ay uga qaadaan 5 iyo 10 qalab Ah oo ku habboon safarada dhaadheer.
Google wuxuu xirayaa albaabka si uu uga ciyaaro waxyaabaha ku jira gudaha ee ka socda ChromeCast
Google ma rabto sheygeeda cusub ee Chromecast inuu ka ciyaaro waxyaabaha ku jira gudaha barnaamijyadooda sida Aircast. Cusbooneysiinta ayaa xirtay wadada.
Panasonic ayaa ku dhawaaqday taleefanka guryaha ee Android
Panasonic ayaa in muddo ah ka tagay suuqa Yurub laakiin waxa uu kula soo noqday taleefan gurigiisa oo wata nidaamka hawlgalka ee Android
Ushaha Android TV Soundbar
Ushadu waxay ku biirtay fikradda hagaajinta codka telefishankeena iyadoo lagu darayo fulinta barnaamijyada Android ee ku jira.
Sony's Smartwatch 2 waxaa lagu cusbooneysiiyay xulashooyin dhab ah oo lagu xiro curcurkaaga
SmartWatch ayaa soo muuqan doona Sebtembar, oo leh astaamo wanaagsan iyo naqshad aad u fiican, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la arko haddii ay la kulanto filashooyinka.
Adeegsiga Google Glass xafladda Justin Timberlake
The Verge waxay noo soo bandhigaysaa waayo-aragnimada ay bixiso Google Glass habeen aan la ilaawi karin oo ka mid ah riwaayadaha tooska ah ee Justin Timberlake
IMH79 Hadalleyda La Qaadan Karo
Waxaan kuu soo qaadaneynaa dib u eegista iHM79 ku hadlayaasha la qaadi karo, xushmad LeTrendy.
Apple iPhone 5 ah oo afar qarax la kulantay
Apple iPhone 5 waxaa lagu xantaa inuu la kulmay afar qarax oo dab ku xigo kadib markuu dhameeyay wicitaan taleefan.
Sneakers oo leh farsamada Google
Kabaha isboortiga ee Google ayaa loo soo bandhigay inay yihiin qalab qarsoodi ah oo ku yaal Austin, Mareykanka oo ku taal Koonfurta Southwest.
LG iyo waxyaabo lala yaabo MWC 2013
Shirkadda LG waxay layaab ku noqotey ogeysiisyo iyo aalado dhowr ah oo hubaal ah inay dhihi doonaan Barcelona inta lagu jiro MWC 2013
Runbo waxay soo bandhigtay barnaamijyadeeda Android walkie-talkies
Shirkadda Runbo waxay soo bandhigtay intii lagu jiray CES 2013 seddex nooc oo taleefannada gacanta ee casriga ah oo u adkaysta naxdinta, ...
Cruz Reader iyo Cruz Tablet laba Android 7 inji ah dhawaan iib
Laba aaladood oo cusub oo Android ah ayaa u muuqda ganacsigii ugu horreeyay, Cruz Reader iyo Cruz Tablet.
Acer Aspire One D260, netbook cusub oo leh labo boot oo Windows-Android ah
Acer Aspire One D260 waa netbook-ka cusub ee boot-ka ah oo aan ku wada xirxi karno Windows 7 iyo Android labadaba.
Acer Aspire One D260, waa netbook netbook ka kooban oo leh laba boot
Acer Aspire One D260, waa buug-gacmeedkii ugu dambeeyay ee ay shaaciso Acer kaasoo la imaan doona Dual Boot
Archos 5 Tablet-ka Internet-ka ayaa horay u lahaa taageerada Open GL
Archos wuxuu soo saaray cusbooneysiin loo yaqaan 'Archos 5 Internet Tablet' kaas oo siiya taageerada Open GL
Kiniin leh borojektar dhammaantiis oo hal ah oo waliba leh Android
DigiLife waxay noo keeneysaa fikrad cusub oo qalab iyo dabcan leh Android oo ah jilaha ugu weyn ee nidaamkeeda maareynta, waa kiniin sidoo kale ah mashruuc
Compaq Airlife 100 HP ee netbook-ka Android ee hadda laga heli karo Movistar
HP's Android netbook, Compaq Airlife 100, oo leh Movistar ayaa hadda la heli karaa
WePad, kiniin ah Android si ay ula tartamaan iPad-ka
Wepad waa kiniin Android ah oo aan arki doonno dhamaadka sanadka iyo iPad-ka ayaa noqonaya tartan dhab ah
Oppo waxay soo saari doontaa dhagayste iyo taleefan, labaduba waxay wataan Android
Shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee Oppo ayaa ku dhawaaqday inay soo saartay qalab wax lagu akhriyi karo iyo xarun ay ku shaqeeyaan oo ay la socdaan nidaamka hawlgalka ee Android
15-inji Vega ICD, sawirro
Kiniinkan 15-inji ah ee loo yaqaan 'ICD Vega tablet' ayaa lagu soo bandhigay xarunta CES ee haatan ku taal Las Vegas
ICD VEGA, JADWALKA 15,6-INCH OO AAD LEH ANDROID 2.0
Kiniin aad u qurux badan ayaa ka muuqda adduunka Android. Kani waa ICD VEGA. Waxaa ka mid ah astaamaha ...
Suuq INSYDE, SUUQA LOOGU TALAGALAY NETBOOKS
Maaddaama Android loo rarayo ama lagu geynayo Netbooks, si macquul ah dukaan waa inuu u muuqdaa codsiyada aaladahaan, tan waxaa lagu magacaabaa Suuqa Insyde
SAMSUNG MP3 OO LA SOO KORDHAYA Android
Samsung waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto noocyo badan oo ciyaartoy Mp3 ah oo wata Android nidaam maamul ahaan.
ARCHOS AYAA FURTAY DUKAANKIISA APRO ANDROID
Shirkadda qalabka wax lagu duubo ee Archos ayaa furatay dukaan u gaar ah oo ay ka dalban karto barnaamijka Android